भाइरल हुँदै विराट कोहलीको पहिलो अन्तरवार्ता, ११ वर्षअघि यस्तो भनेका थिए ? (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भाइरल हुँदै विराट कोहलीको पहिलो अन्तरवार्ता, ११ वर्षअघि यस्तो भनेका थिए ? (भिडियो)
एजेन्सी। भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीको पहिलो अन्तरवार्ता भाइरलभइरहेको छ । यो अन्तरवार्ता २००७ मा भारतीय विद्या भवनले लिएको थियो । यो अन्तरवार्तामा विराटको क्रिकेटका विषयमा समझदारी र मनोबल उच्च देखिन्छ । विराट कोहलीसँग रणजी खेलाडी पुनित बिष्ट छन् ।
पुनित बिष्ट तिनै खेलाडी हुन् जसले नेपालमा आएर धनगढी प्रिमियर लिग खेलेका छन् । धनगढी प्रिमियर लिगमा पुनित बिष्ट महेन्द्रनगर युनाइटेडमा आबद्ध छन् । पुनित अहिले भारतको मेघालय टिमबाट रणजी ट्रफी खेल्छन् । उनी आइपिएल टिम दिल्ली डेयरडेभिल्समा पनि आबद्ध छन् । यो अन्तरवार्ताको समयमा विराट र पुनितको स्तर एकसमान थियो । त्यतिबेला विराटले राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेकै थिएनन् । तर, अहिले विराट भारतको राष्ट्रिय टिमका कप्तान भइसकेका छन् ।
यी दुइले त्यतिबेला २००७ को विश्वकपको लागि छानिएको भारतीय क्रिकेट टिमको विषयमा कुरा गरेका छन् । त्यतिबेला टिमका कोच ग्रेग च्यापेल थिए । अन्तरवार्तामा विराटलाई २००७ को विश्वकपका बेला फर्ममा नरहेका वीरेन्द्र सहवागलाई टिममा लिनुको विषयमा सोधिएको थियो जसको जवाफ विराटले निकै समझदारीपूर्वक दिएका थिए । हेर्नुहोस् भाइरल भइरहेको पुरानो अन्तरवार्ता –